Allbanaadir.com Kala Soco Warar Xaqiiqa ah - News: Xiisad maanta ka taagan Balad Xaawo iyo Siyaasiyiin Degmadaasi Banaanka uga baxay
August 18 2017 15:34:46
Xiisad maanta ka taagan Balad Xaawo iyo Siyaasiyiin Degmadaasi Banaanka uga baxay
Wararka ka imaanaya Degmada Balad Xaawo ee Gobolka Gedo, ayaa sheegaya in maanta ay halkaasi ka taagan tahay xiisad u dhaxeysa Ciidamo kala taageersan Maamulka Jubbaland iyo Ciidamo kale oo daacad u ah Xildhibaan katirsan Baarlamaanka Soomaaliya iyo Siyaasiyiin kale.
Dadka deegaanka ayaa ku waramaya in ay jirto cabsi laga qabo in ay isku dhacaan ciidamo Daacad u ah Wasiir kuxigeenka Arimaha gudaha Jubaland Cabdi Rsahiid Janan iyo Ciidamo kale oo daacad u ah Xildhibaan Cabdi Fataax Nuur Mataan iyo Siyasaiyiin kale oo degmadaasi ku sugan.
Sida Wararka ku heleyno Ciidamada Daacada u ah Xildhibaanka iyo Siyaasiyiinta kale ee la socota ayaa banaanka uga baxay Degmada Balad Xaawo, waxaana hada degmada ku sugan ciidamo uu wato Cabdirashiid Janan.
Xildhibaan Cabdi Fataax Nuur Mataan, oo Warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in Ciidamo daacad u ah Wasiir kuxigeenka Arimaha Gudaha Jubbaland ay kusoo qaadeen Weerar ay doonayeen in ay ku qaarijiyeen.
Waxa uu tilmaamay Xildhibaanka in Dacwad ka dhan ah Cabdirashiid Janan ay u gudbiyeen Hay'adaha Garsoorka dalka , waxa uuna intaa raaciyay in Masuulkan katirsan Jubbaland uu dhibaato ku hayo Siyaasiyiinta iyo dadka kale ee ku dhhaqan Balad Xaawo.
Shacabka ku dhaqan Degmada Balad Xaawo ayaa ka cabsi qaba in korkooda lagu dagaalamo, waxa ayna qaarkood bilaabeen in ay u baxaan dhinaca Degmada Mandheera ee Dalka Kenya, waxaana inta badan xiran goobaha ganacsi ee Degmada Balad Xaawo.
Waxgarad iyo Siyaasiyn kale oo ku sugan Degmada Balad Xaawo , ayaa wada dadaalo lagu qaboojinayo xiisada ka taagan Degmada Balad Xaawo, waxa ayna la kulmeen labada dhinac inkastoo aysa wax natiijo ah kasoo bixin wadahadaladasai.